Izindaba - Inani eliphelele lokuthekelisa leZhejiang New Aluminium Technology CO Ltd ngo-2020
Isikhathi esinzima kuwo wonke umuntu ngo-2020 njengeCovid-19, abanye abantu balahlekelwe yimindeni yabo, umsebenzi, ngisho nempilo .Nhlanhla enhle, silapha nempilo
Ngibonga iqembu lethu lokukhiqiza nelokuthengisa, ngenxa yokuxhaswa kwamakhasimende ajwayelekile nokwethenjwa kwamakhasimende amasha, Sifinyelele kwirekhodi elisha lokuthekelisa esikhathini esedlule se-2020 ngesikhathi esinzima kangaka.
Ngokwesitatimende sezimali, sikhiqize amathani ayi-128300 sathengisa amathani ayi-123000 kuwo wonke umhlaba, kufaka phakathi zonke izinhlobo zekhoyili ye-aluminium, ishidi, ucwecwe nombuthano.
Kukhona ngaphezu kuka-40% ikhoyili ye-aluminium kanti u-20% ishidi le-aluminium .Nakuba iCovid-19 ibucayi e-USA, kodwa ukufunwa kwekhoyili ye-aluminium esikhokhelwa ngombala kusakhuphuka e-USA nase-Afrika .Leli irekhodi elisha
Kwamanye amazwe, ukufunwa kwe-aluminium foil yasendlini nokupakisha kokudla kukhuphukile nokuqhathaniswa nonyaka odlule, mhlawumbe njengomphumela we-covid-19, iningi lokudla lidinga ukususa noma ukupakisha okuhle ngocingo lwe-aluminium
Sethemba impela ukuthi iCovid -19 ingasula i-asap futhi singavakashela amakhasimende ethu njengenjwayelo minyaka yonke, ubuso nobuso, ukukhuluma nokugona nokuhleka, kepha hhayi kulayini.
Sisazokhiqiza ikhwalithi ephezulu ye-aluminium bese sizama konke okusemandleni ethu ukunikela ngentengo enhle kuwo wonke amakhasimende ethu, noma ngabe sincane kangakanani noma sikhulu kangakanani, uma nje singakwazi .Sifuna ukwakha ubudlelwano obude nobunenjabulo ngokuhlomulisana.
Vele, uma kukhona inkinga noma iphutha kithi, vele ukhombise, Ngakho-ke singayithuthukisa futhi sikhule ngosizo lwakho nokusekelwa kwakho.
Ubungcweti buwenza uphelele, masenze okuningi ngokubambisana ngo-2021